CompTIA A+ – Stichting Somalische in Breda
Ma ku fekertay in aad noqoto Kombiyuutar tekniishan ? Kooraskaan la yiraa CompTIA A+ waa mid loogu talagalay ardayda rabta in ay noqota xirfadlayaal kombiyuutarada sameeya kuna shaqaysta shaqana ku hela.
Hay adaha dowliga
Hay adaha ganacsiga
Dhamaantooda haddii shaqo u doonato shahaadada lagu weydiinaayo waa CompTIA A+ [Entry Level] oo haddii aad ku dadaasho qaadatana shahaadadeeda ay kuu fududayn karto shaqo helida marka loo fiiryo cid aan haysan shahaadadaan.
CompTIA A+ maxay u taagantahay ?
CompTIA A+ waxay u taagantahay [The Computing Technology Industry Association] waa hay ad aan dowli iyo macaash doon ahayn oo la as aasay mudo laga joogo 37 sanno, xarunteedana ay tahay magaalada Illinois[Ilanooy] wadanka Maraykanka. Hay adaan waxay xaqiijisaa iskuna soo dubaridaa manhajka waxbarasho ee xirfadlayaasha kombiyuutarada iyadana soo dejiso imtixaanka bixisana shahaadooyinka taasoo adduunka oo dhan laga aqoonsanyahay.
Manhajka CompTIA + meeqa cutub ayuu ka koobanyahay ? wuxuu ka koobanyahay 11 cutub sida aad hoos ku aragto
Shuruuda kooraskaan waa in qofka uu yaqaan afka Ingiriisiga oo fure ah marka aad shaqo doon tahay ama haddii aad hesho lagaaga baahanyahay in la xiriirka dadka. Si hadafkaas aad u gaarto waxaa ardayga lagama maarmaan ah in uu dadaal muujiyo si uu u gaaro himilada barashada kooraskaan kana mira dhaliyo .
Isu diyaarinta imxitaanka CompTIA +
Kooraskaan wuxuu leeyahay labo imtixaan oo kala ah
202 – 1001
Imtixaanka waa in aad dalbato balansato. Waana in aad iska bixiso lacagta imtixaamka, Dalabka iyo lacag bixinta ka dib waxaa lagugu soo wargelin doonaa halka iyo saacada maalinta imtixaamka iyo dhamaan wixii shuruud ah ee la xiriira qaabka imtixaamka u galayso oo dhan . Imtixaamka marka laga qaado ama waad ku baasi ama ku dhici. Haddii aad ku baasto waad guulaysatay.
Markaad noqoto A + Ceritifed waxaa kuu furan in aad gasho shaqada xirfada kombiyuutarada waxa loo yaqaan Entry Level. oo halka laga bilaabo adigoo ka sarayso Helpdesk support balse qaban qaro howlaha Helpdesk support. fiirso fiidiyowgaan
Waxay ku xerantahay wadanka aad rabto in aad shaqo ka raadiso guusha arjiga shaqo raadinta. Tusaale haddii aad Nederland shaqo ka raadiso waxaa lagama maarmaan ah in aad luqada Nederlandeeska taqaano ama luqad kale sida Ingiriiska, Faransiiska iwm.
Waxaa jira Soomaali badan oo xirfad ahaan bartay qaatayna shahaadada CompTIA + laakiin aan shaqo ku helin sababo badana ay ugu wacantahay in aysan shaqo ku helin,
Waxaan calaf ahayn lama cuno waxaan wad ahayna looma dhinto
Dadaal xumo iyo caajisnimo
Luqada dadka uu shaqada ka raadinaayo oo uusan aqoon
Xiriir la’aan bulshada uu la dhaqan yahay ee loo yaqaan Network la’aan
Afeef: Iyadoo ay adagtahay in xarfaha qaarkood la tarjumo oo Soomaali laga dhigo ayaan waxaan intii karaankeen ah isku dayi doonaa in Soomaaliyeyno xarfaha. 11 cutub mid mid ayaan u qaadan doonaa haddii Alle idmo.
Xarunta dhaqanka Jaaliyada Soomaalida Bareeda